Open Data Day Yangon Registration, Myanmar - EventNook
Title: Open Data Day Yangon
Date: Monday, 04 Mar 2019 09:00 AM
Place: Phandeeyar, 628/636 Merchant Road (10th Floor, Royal River View Condo), Yangon, Yangon Region, Myanmar
How Can Open Data Move Myanmar Forward
Monday, Mar 4, 2019, 09:00 am - 12:30 pm
Phandeeyar 628/636 Merchant Road (10th Floor, Royal River View Condo), Yangon, Yangon Region, Myanmar
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ နှစ်စဉ်ကျင်းပနေတဲ့ ကိုးကြိမ်မြောက် International Open Data Day ကို ဒီနှစ်မှာတော့ ရန်ကုန်ကနေပါဝင်ကျင်းပမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးကို လာရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ အခုကျင်းပမယ့် International Open Data Day မှာတော့ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အသီးသီးမှ ကျွမ်းကျင်သူများအားလုံးက ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တိုးတက်မှုအတွက် open data ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုနိုင်မလဲ ဆိုတာ ဆွေးနွေးသွားမှာပါ။
Asia Foundation, Friedrich Ebert Stiftung နဲ့ ဖန်တီးရာကနေ ပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့ ဒီပွဲမှာ နိုင်ငံတကာနဲ့ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ data ကျွမ်းကျင်သူတွေကနေ panel discussions ဟောပြောပွဲများ၊ case studies များနဲ့အတူ ဗဟုသုတမျှဝေတဲ့ အစီအစဉ်များလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
data for social good၊ how to be responsible with open data ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအပါအ၀င် ဆွေးနွေးပွဲတွေအတွက် ပါဝင်ဆွေးနွေးမယ့်သူများကို မကြာခင်ကြေငြာပေးသွားမှာမို့ လက်မလွှတ်ရအောင် ဖန်တီးရာ Facebook Pageကိုစောင့်ကြည့်လိုက်ပါ။
ပွဲလာရောက်သူများအတွက် မနက်စာနဲ့ သရေစာမုန့်များကိုလည်း စီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကမ်ဘာတဈဝှမျးမှာ နှဈစဉျကငျြးပနတေဲ့ ကိုးကွိမျမွောကျ International Open Data Day ကို ဒီနှဈမှာတော့ ရနျကုနျကနပေါဝငျကငျြးပမှာဖွဈတဲ့အတှကျ အားလုံးကို လာရောကျဖို့ဖိတျချေါလိုကျပါတယျ။ အခုကငျြးပမယျ့ International Open Data Day မှာတော့ သကျဆိုငျရာနယျပယျအသီးသီးမှ ကြှမျးကငျြသူမြားအားလုံးက ပါဝငျမှာဖွဈပွီး မွနျမာနိုငျငံရဲ့ တိုးတကျမှုအတှကျ open data ကို ဘယျလိုအသုံးပွုနိုငျမလဲ ဆိုတာ ဆှေးနှေးသှားမှာပါ။
Asia Foundation, Friedrich Ebert Stiftung နဲ့ ဖနျတီးရာကနေ ပူးပေါငျးကငျြးပတဲ့ ဒီပှဲမှာ နိုငျငံတကာနဲ့ ပွညျတှငျးမှာရှိတဲ့ data ကြှမျးကငျြသူတှကေနေ panel discussions ဟောပွောပှဲမြား၊ case studies မြားနဲ့အတူ ဗဟုသုတမြှဝတေဲ့ အစီအစဉျမြားလညျးပါဝငျမှာဖွဈပါတယျ။
data for social good၊ how to be responsible with open data ဆိုတဲ့ခေါငျးစဉျတှအေပါအ၀ငျ ဆှေးနှေးပှဲတှအေတှကျ ပါဝငျဆှေးနှေးမယျ့သူမြားကို မကွာခငျကွငွောပေးသှားမှာမို့ လကျမလှတျရအောငျ ဖနျတီးရာ Facebook Pageကိုစောငျ့ကွညျ့လိုကျပါ။
ပှဲလာရောကျသူမြားအတှကျ မနကျစာနဲ့ သရစောမုနျ့မြားကိုလညျး စီစဉျပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
Yangon is joining the world in celebrating the 9th annual International Open Data Day and you're invited! The community is coming together forastimulating morning as we discuss how to use open data to move Myanmar forward.
Proudly co-hosted by the Asia Foundation, Friedrich Ebert Stiftung, and Phandeeyar, the International Open Data Day celebration will bring international and local data actors under one roof for panel discussions, case studies, and knowledge sharing.
Stay tuned as we announce our lineup of speakers and panelists covering topics such as data for social good and how to be responsible with open data.
Breakfast and snacks will be served!
Check the Facebook event page here for updates.
Phandeeyar, 628/636 Merchant Road (10th Floor, Royal River View Condo), Yangon,Yangon Region, Myanmar